Nyanzvi Dzinoti Zacc Yava Kutsvaga Uta neMugate Pana VaBiti
Tendai Biti At Parliament
Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zacc, inoti iri kutsvaga vaimbove gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa, VaTendai Biti, ichiti iri kuda kuvaferefeta nyaya ine chekuita nemabatiro avakaita mari yehurumende inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora akaiswa mubhanga reRennaisance.
Bhanga iri rakazovharwa muna 2014.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura naVaBiti sezvo matare akambovamisa kutaura nevatori venhau.
Asi nyanzvi inoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Insitute, VaBekezela Gumbo, vati Zacc iri kushandiswa mune zvematongerwo enyika.
VaGumbo vati zvinoshamisa kuti munhu akaita saVaBiti akabva muhurumende muna2013 ava kupomherwa mhosva.
Vachitaura nevatori venhau kumahofisi avo, mumwe wemakomishina eZacc, VaGoodson Nguni, avo vanotungamira bazi rinoongorora huori,vati vakapiwa mazino nehurumende itsva kuburikidza nekupiwa mari inovakwanira izvo zvichaita kuti vaite basa ravo nemazvo.
VaNguni vati vave kutovhura mahofisi kumatunhu akasiyanasiyana munyika, uye vayambira vanhu vari kuenda kunzvimbo dzinowanikwa musvo wemari vachitora mari vachishandisa Eco Cash, vachasungwa.
VaNguni vatiwo Zacc ichabatawo vari kutengesa mari mumigwagwa panguva iyo vanhu vari kushaya mari mumabhanga.
VaNguni vati vakuru vemabhanga vachabatwa kuti ndivo vari kubudisa mari kuendesa kune vanotengesa marimumigwagwa, vacharangwawo.
Vachipindura mibvunzo yevatori venhau kuti zvii zvaivatadzisa kubata nekusunga vaiita huori huye vaibira nyika, VaNguni vati hurumende yaitungamirirwa nevaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, yanga isingavatsigiri kuti vaite basa ravo nemazvo.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kubva zvagadzwa Zacc hapana zvinobatika zvayati yaita mukurwisa huori munyika, kunze kwekushandiswa munyaya dzematongerwo enyika kuburikidza nekuomesera vanenge vasisadiwi munyaya dzematongerwo enyika.